Sahara Andrefana: Fampisehoana Ny Tontolombolongana Sahraouie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2018 11:58 GMT
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Jolay 2008
Na dia miteny arabo na espanola aza ny ankamaroan'ireo Sahraouis, nifidy ny hanao blaogy amin'ny teny anglisy ny sasantsasany. Anisan'izany, ireo sasantsasany monina any ivelany, ireo hafa ao Maraoka na ao Sahara Andrefana. Mbola misy hafa manohana ny tolon'ny sahraouie avy any amin'ireo firenena hafa. Ny tanjona eto dia ny hampita an'izay resahan'ny rehetra ao anatin'io faritra io, na inona na inona toerana misy azy ara-politika sy ny finoany.
Fanolorana an'i Sahara andrefana miteny anglisy
One Hump or Two? [teny anglisy] dia blaogy iray malaza izay mandrakotra an'io faritra io. Amerikana, Will dia miavaka manokana amin'ny fanampiana izay nentiny ho antsika tao anatin'ny fikarohana an'ireo blaogy tsara indrindra ao amin'ny faritra. Ny azy dia mandrakotra an'ireo antony ara-politika sy ara-kolontsaina. Ity ny ampahany iray tamina lahatsoratra vao haingana:
Tsy tena mpankafy ny fibodoan'ny maraokàna an'i Sahara Andrefana akory aho, saingy tiako i Maraoka amin'ny maha-firenena azy – ireo rehetra fantatro ka nandeha tany dia tia avokoa, ary ampy tsara ny hatsaram-panahin'ny governemanta maraokanina nahafahan'ny namana iray handranto fianarana any, amin'ity enimbolana ity, na eo aza ireo fifandraisany tamin'ireo mpitaky fizakantena toa ahy. Izay no antony irariako an'i Maraoka, sy ireo Sahraouis izay ao anatin'ireo tarika misy azy ireo, mba hahazo medaly maro araka izay iriany, amin'ireo Lalao Olaimpika amin'ny volana hoavy.
View from Fez [teny anglisy] nanopy maso an'ireo vintana ananan'i Maraoka ary manipika fa, tany aloha tany, nahazo medaly tamin'ny lalao ady totohondry sy atletisma ny firenena. Araka ny hita, tsara ihany koa ny tarika taekwondo maraokanina, noho izany maminany andianà [medaly] iray aho.
Ny FreeWesternSahara dia blaogy saharaoui iray izay ny teny filamatra dia ny hoe “Tsia ho an'ny fahavitàntena, fa eny ho an'ny fitsapànkevibahoaka“. Lahatsoratra iray vao haingana [rohy tapaka] no mampiseho an'ireo sarin'i Sahara Andrefana, anisany ity manaraka ity:
Blaogera saharaoui iray hafa mamoaka amin'ny teny anglisy ny Freedom Writer. Ity ny ampahany tamin'ny lahatsoratra iray vao haingana mikasika fanapahankevitra iray sarotra:
Milaza i Emerson fa tiany kokoa “Ireo izay manao tsia” fa tsy “Ireo izay manao eny” ary ekeko ny amin'izay. Mitatitra i Emerson fa ny “tsia” dia midika “eny” ho fitsitsiana ny fotoana sy ny angovon'ireo hafa. Na ao anatina karazana zava-misy inona na inona (tolotrasa, fanasàna…), raha toa isika mifidy ny hiteny hoe ‘tsia’, mitsitsy ny herintsika sy ny fotoanantsika isika, ary ireo ezaky ny hafa mba handresentsika, ary araka izay voalazan'i Léonard de Vinci: “mora kokoa ny manohitra eny am-boalohany noho ny amin'ny farany.”
Manoratra mikasika an'i Sahara Andrefana ireo blaogera vahiny hafa. Amin'izy ireo, mamoaka blaogy Western Sahara Info [teny anglisy] i alle, loharanom-baovao iray tsara indrindra mikasika ny faritra. Ny Sand & Dust [teny anglisy], navoakan'i Nick Brooks, dia loharano iray lafatra ho an'ireo izay maniry hahalala bebe kokoa mikasika ny fifandirana misy eo amin'i Maraoka sy i Sahara Andrefana. Blaogy iray fahatelo, ny Western Sahara Endgame [teny anglisy], manisy tsindrim-peo mikasika ireo olana politika.
Mikasa ny hanitatra ny fandrakofany an'i Sahara Andrefana ny Global Voices. Eo ampikarohana mandrakariva an'ireo blaogy vaovao ho arahina izahay. Raha mahafantatra izany ianao, ampahafantaro anay izany!